Fanadihadiana Huawei P8 Lite, notsapainay tsara izy io | Androidsis
Huawei P8 Lite, satria ny kalitao dia tsy tokony hifanohitra amin'ny vidiny
Tamin'ny faran'ny volana aprily ny Huawei P8 Lite -...Huawei P8 Lite »/] dia nahatratra ny tsena Espaniola. Finday iray misy famolavolana sy fiasa manandratra azy eo an-tampon'ny afovoany midadasika noho ny heriny sy ny faran'ny hatsarany.
Rehefa avy nahazo an'ity telefaona ity nandritra ny tapa-bolana dia mazava ny fehin-kevitro: tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo fitaovana antonony tsara indrindra eny an-tsena. Ka andao hirosoana Huawei P8 Lite famerenana, telefaona hampihetsiketsika ny mpifaninana aminao.
1 Volavola manintona izay manalavitra ireo mpifaninana aminy
2 Huawei P8 Lite, miloka amin'ny vahaolana manokana
3 Mpiresaka avo lenta
4 Interface tsara intuitive sy haingana, na dia tsy dia ilaina loatra amin'ny mode multitasking aza
5 Atsofohy ny fakantsary tsara indrindra ho hitanao amin'ny telefaona midadasika
5.1 Ohatra amin'ny sary
5.2 Saripika mahazatra vs sary amin'ny fomba HDR
6 Mihoatra noho ny fahaleovan-tena miavaka
8 Hevitry ny Editor
Volavola manintona izay manalavitra ireo mpifaninana aminy
Efa mahita ny boaty an'ny P8 Lite sy ny azy endrika kely indrindraMazava fa ny ekipa mpamolavola Huawei dia nanisy lanja betsaka io lafiny io. Ary rehefa maka ilay fitaovana ianao dia mahamarika ny kalitaon'ny famaranana.
Mirefy 143mm avo, 70,6mm lava ary toy izany 7,7 mm ihany ny sakany, Mazava fa telefaona mora ampiasaina ny Huawei P8 Lite. Ary ny lanjany 131 grama dia mahatonga ity terminal ity ho fitaovana maivana tokoa.
Ary ahoana ny famolavolana azy; SYl P8 Lite dia manaparitaka ny stereotype izay tsy maintsy misy famaranana eo anelanelan'ny terminal; raha ny vatosoa kely an'i Huawei dia misy kalitao mivoaka amin'ny mason-koditra rehetra.
Hanombohana azy, ny Huawei P8 Lite dia manana vatana vita amin'ny polycarbonate na dia ny endrik'ilay fonony any aoriana aza dia mampahazo aina azy tsara ny mikasika azy, ankoatry ny fisorohana azy tsy hiala eo am-pelatananao. Ankoatra ny Ny endriny aliminioma izay mamonosina manodidina ilay fitaovana dia manome azy fijery tena lafo.
Eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny telefaona no ahitantsika ny bokotra herinaratra sy ny fifehezana ny volavola. Ny bokotra rehetra koa dia namboarina tamin'ny aliminioma, manolotra a kalitao amin'ny mikasika tena mahafinaritra. Afaka milaza isika fa ny fananganana azy dia mihoatra ny marina.
samy Kardan'ny SIM micro sy karatra fahatsiarovana, dia hita eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny terminal, amin'ny fampiasana ny rafitra pin mahazatra hanalana ny karatra. Ny antsipiriany iray izay tena tiako dia ny hoe ny iray amin'ireo slot dia azo ampiasaina ho an'ny karatra microSD sy ny karatra SIM nano. Teboka iray ho an'i Huawei ary azon'ny mpanamboatra hafa alain-tahaka.
Ny jack 3.5mm dia eo an-tampon'ny Huawei P8 Lite, raha mbola eo ambany kosa ireo mpandahateny stereo. Ny kalitaon'ny feo dia tena tsara, singa iray tokony hodinihina. Ratsy loatra fa ny toerana misy an'ireo mpandahateny dia mahatonga antsika indraindray mamily ny outlet audio, mampihena be ny kalitaon'ny feo. Fahadisoana ataon'ny ankamaroan'ny mpanamboatra, fa fahadisoana daholo.
Ary tsy afaka manadino ny momba ny fakantsary, hita eo ankavia ankavia isika. Mariho fa ny fakantsary dia tsy miavaka mihitsy, manaraka an'io tsipika farafaharatsiny sy fahatsapana ny fahamendrehana nampitain'ny Huawei P8 Lite.
Huawei P8 Lite, miloka amin'ny vahaolana manokana
Ny efijery P8 Lite dia misy a Tontonana LCD IPS 5-inch izay mahatratra ny vahaolana 1280 x 720 teboka sy 294 dpi. Ny marina dia tena tsara ny kalitao, manolotra loko marobe miaraka amin'ny tonony mazava be. Ho fanampin'izany, Huawei dia mamela anao hikirakira ny mari-pana amin'ny loko, ahafahan'ny mpampiasa tsirairay manatsara ny tonalities an'ny efijery araka ny tiany.
Mikasika ny zoro fijerena, amin'ny fanadihadianay ny Huawei P8 Lite dia nahavita tsara, manolotra sakany somary midadasika ary mamela azy hampiasaina amin'ny tontolo iainana: na inona na inona masoandro, dia afaka mahita ny efijery tsy misy olana ianao, zavatra iray izay tiako indrindra.
Ary raha olona tsy mitandrina ianao izay mamela ny telefaona eo akaikin'ny lakile na zavatra hafa mety hanimba ny efijery, matokia. ny Corning Gorilla Glass 4 sosona fiarovana izay mampifandray ny tontonana eo alohan'ny P8 Lite dia hisoroka ny fampitahorana maro. Izaho manokana dia iray amin'ireo olona ireo ary amin'ity tranga ity, aorian'ny fampiasako mafy tapa-bolana, tsy nisy fahasimbana ny terminal.
Eo ambanin'ny lamba misimisy dia ahitantsika mpanodina marika trano: HiSilicon Kirin 620 valo fototra amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 1.2 GHz sy maritrano 64-bit. Raha manampy an'ity ARM Mali-450 GPU mahery sy RAM 2 GB mahery ity, dia mazava fa terminal Huawei mahery ny Huawei P8 Lite.
Su 16 GB fahatsiarovana anatiny Hihoatra ny filan'ny mpampiasa indrindra izany, fa raha tsy ampy izany dia azonao antoka fa: ny slot misy ny karatra micro SD dia ahafahanao manitatra ny ROM an'ny telefaona hatramin'ny 128 GB.
Mametraka laharana eo ambony latabatra dia lazaiko anao izany AnTuTu dia nahazo isa 34808, isa tsara dia tsara ary mampiseho fa ny Huawei P8 Lite dia telefaona matanjaka tokoa ho an'ny elanelam-potoana kendreny. Fa ny zava-dehibe dia ny fomba fitondrantenany amin'ny taratasy. Ary eto dia afaka mampinono ny fitaovana vaovaon'ny mpanamboatra aziatika.
Ho an'ny vao manomboka, ny P8 Lite dia miasa toy ny landy, tsy misy fijanonana na ratra manelingelina. Nanandrana lalao izay mitaky loharanon-karena be dia be aho, toy ny Modern Combat 5 na Real Racing ary nitondra tena tsara ny telefaona. Ny hany saingy indraindray nanjary somary mafana, zavatra mahazatra amin'ny telefaona sasany, noho izany dia tsy hanahy be loatra momba io lafiny io aho.
Mpiresaka avo lenta
Amin'ny maha mpampiasa ny HTC One ahy dia somary sahirana aho momba ilay olana momba ny feo. Ny ankamaroan'ny terminal dia matetika no mandiso fanantenana ahy amin'ity lafiny ity, na dia nahagaga ahy aza ny Huawei P8 Lite. Na dia marina aza fa ny mpandahateny azy ireo dia tsy tonga amin'ny kalitaon'ny BoomSound an'ny mpanamboatra Taiwanese, ary ny toe-javatra misy azy ireo dia midika fa azonao atao ny manarona azy ireo tsy nahy, tsy maintsy ekentsika ny asa lehibe vita amin'ity lafiny ity.
Ny rafitrao Ny fanamafisam-peo marani-tsaina (Smart Power Amplifier) ​​dia manakana ny fanapahana feo rehefa mihaino mozika ianao dia mahatsikaritra ihany koa ny tsindry sy ny maripana ary ny amplitude mba hanomezana feo avo lenta.
Raha fintinina, iray amin'ireo lafiny mampiavaka ny Huawei P8 Lite amin'ireo mpifaninana aminy. Marina izany.
Interface tsara intuitive sy haingana, na dia tsy dia ilaina loatra amin'ny mode multitasking aza
Fotoana izao hiresahana ny lafiny ratsy ihany hitako ny Huawei P8 Lite: ny interface-ny. Na dia marina aza fa miasa io finday io Android 5.0, ny mpanamboatra aziatika dia nametraka ny interface EMUI 3.1 natokana ho azy. Fifanarahana azo alamina tanteraka izay ahafahanao manamboatra masontsivana maro mamela ny mety hanaingoana ny telefaona araka ny itiavanao azy.
Na dia marina aza izany EMUI 3.1 dia manolotra fahombiazana tsara indrindra, tsy misy fanapahana na fijanonana, ny safidy multitasking dia tena manelingelina. Ny zava-misy amin'ny fahitana fampiasa efatra misokatra farafaharatsiny ary tsy maintsy mandeha amin'ny varavarankely samihafa hahitanao ilay rindranasa tianao hosokafana dia mety hahasosotra.
Misy fotoana rehefa Mety kokoa ny mankany amin'ny menio lehibe ary mahita ilay rindranasa tiana hampiasaina toy izay hanararaotra multitasking. Lesoka manelingelina, fa ny iray izay tsy mavesatra loatra amin'ny traikefan'ny mpampiasa, izay mbola tena tsara.
Ho setrin'izany dia tsy maintsy asongadintsika ireo antsipiriany tena mahaliana; Hanombohana azy, ny P8 Lite dia mamela anao hampavitrika fiasa sasany, toy ny fakan-tsary na mozika, amin'ny alàlan'ny fanaovana fihetsika tsotra eo amin'ny efijery. Ny vokany dia tena manintona ary miasa haingana sy mora. Ankoatry ny fananan'ny mpanamboatra sinoa radio FM natsangana ho fenitra ao amin'ny Huawei P8 Lite, izay heveriko manokana fa iray amin'ireo singa fototra izay tokony ho fenon'ny telefaona rehetra.
Atsofohy ny fakantsary tsara indrindra ho hitanao amin'ny telefaona midadasika
Izaho manokana dia mihevitra ny fakantsary ho iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny smartphone. Ary ny Huawei P8 Lite dia mihoatra noho ny ampy amin'ity lafiny ity. Ny efitranony lehibe noforonin'i a 278 megapixel Sony IMX 13 BSI lens (f / 2.0 aperture ary 28mm sakany) miaraka amin'ny flash LED roa sosona dia manome fahombiazana tena tsara, ahafahanao manamboatra masontsivana maro toy ny ISO, fifandanjana fotsy, mahavoky, miharihary, mifanohitra na mamiratra.
Ho fanampin'ny fanolorana modely fisamborana isan-karazany, Ny fakantsary lehibe an'ny Huawei P8 Lite dia manome andian-dahatsoratra tena mahaliana:
Panorama: Ahafahanao maka sary panoramic amin'ny alàlan'ny fampidirana sary maromaro miaraka amin'izay miaraka amin'ny valiny mahavariana.
Sary tsara indrindra: mampihetsi-po an'ity fiasa ity dia hahafahanao maka sary maro miaraka ary hisafidy ny sary tsara indrindra
Fanamarihana audio: rehefa maka sary miaraka amin'ity maody ity ianao dia afaka mampiditra naoty an-tsoratra. Fomba iray manontany tena handefasana fiarahabana na fiarahabana.
Mode HDR: ny maody HDR ahafahanao maka ny lokon'ny sary dia fantatry ny rehetra. Raha hainao ny mampiasa azy io amin'ny fomba tsara, dia hampiaiky volana anao ny fahasamihafana. Hahita ohatra maromaro momba ny mahasoa azy ianao amin'ny sary eto ambany.
Fifantohana tanteraka: Amin'ny alàlan'ny fampihetsehana ity safidy ity dia hanao fisamborana mahazatra isika, fa avy eo afaka manararaotra ilay rindrambaiko fanodinana matanjaka an'ny Huawei P8 Lite hifantoka amin'ny singa rehetra amin'ny sary. Safidy manaitra sy tena ilaina.
Notsapaiko ny fakan-tsary tamin'ny tontolo samihafa ary ny valiny dia nahafa-po kokoa. Momba ny tontolo iainana misy jiro mety indrindra, toy ny andro main-tany, ny sary azony dia tonga lafatra, manolotra maranitra sy ambaratonga amin'ny antsipiriany izay mifaninana amin'ny finday avo lenta.
Ny ankamaroan'ireo valiny ireo dia tsy maintsy omena asa fanodinana sary tsara indrindra an'ny Huawei P8 Lite. Toy ny fanao amin'ny telefaona finday, rehefa miseho sary amin'ny tontolo maizimaizina dia miseho ilay tabataba natahotra.
Saripika mahazatra vs sary amin'ny fomba HDR
Ny hany nefa hitako dia ny fakantsary Huawei P8 Lite manana olana amin'ny fifantohana amin'ny halavirana tena lavitra, saingy amin'ny teny fohy dia azoko lazaina izany Ny fakantsary Huawei P8 Lite dia iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena ary azo antoka fa mamafa ny telefaona misy azy.
Mihoatra noho ny fahaleovan-tena miavaka
Tato ho ato, ny faritra Honor natokana ho an'ny tsena eropeana dia namela tsiro be teo am-bavako noho ny fizakan-tenan'ny terminal izay nodinihiko. Saingy, hihaona amin'ity fizarana ity ve ny Huawei P8 Lite? Na dia marina aza fa tsy mahatratra ny haavon'ny terminal Honor dia tsy maintsy lazaiko izany ny zava-bitany dia nahafa-po fotsiny. Ary mandany bateria tsy misy indrafo ilay Android 5.0.
Amin'ny fampiasana voafetra, naharitra roa andro ny P8 Lite tamiko. Raha misy fampiasana mahery vaika kokoa, filalaovana lalao mandritra ny fotoana fohy, miaraka amin'ny adiny iray na sasany sy sasany ao amin'ny Spotify ary manaparitaka ny efijery amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy sy atiny multimedia, dia tsara kokoa ny valiny, kokoa raha raisintsika an-tsaina izay mampifangaro a Batterie 2.200 mAh.
Araka ny hitanao amin'ny sary, ny Huawei P8 Lite dia naharitra mihoatra ny 32 ora tamin'ny, zavatra mbola tsy nisy toa azy tamin'ny finday avo lenta androany. Mazava ho azy, amin'ny alina amin'ny maody fiaramanidina, izay tsy drafitra handraisana fampandrenesana rehefa matory aho. Fizarana iray hafa izay miavaka ny P8 Lite raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy.
Ny fahatsapana dia tsy tokony ho tsara kokoa. Fikitika mahafinaritra, fijery kely indrindra miaraka amin'izay fikitika premium izay tianao be, fakan-tsary tsara kalitao ary fahombiazana tsara indrindra. Inona koa no angatahina? Vidiny novaina.
Mihevitra fa ny Huawei P8 Lite dia mitentina 269 euroNa dia mikaroka an-tserasera aza ianao dia afaka mahita azy mora vidy foana, tsy misy isalasalana fa izy no mpanjaka isany ary iray amin'ireo safidy mahaliana indrindra tokony hodinihina.
Famolavolana minimalista sy famaranana izay manome touch premium tena tsara amin'ny Huawei P8 Lite
Ny fizakantenan'ny telefaona dia manakaiky ny roa andro
Ny fakantsariny 13 megapixel no tsara indrindra amin'ny fari-tanany ary iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena
Ny toeran'ny mpandahateny dia mety hahatonga antsika hanakana ny vokatra rehefa mampiasa lalao sasany
Ny fomba multitasking an'ny interface EMUI 3.1 dia tena tsy mandeha
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei P8 Lite, satria ny kalitao dia tsy tokony hifanohitra amin'ny vidiny
106 hevitra, avelao ny anao
Mercy dia hoy izy:
Salama Hello…. Tsy fantatro raha ho masira aho fa manana fialamboly ho an'i Huawei ... Manana Ascend P7 aho izao ary maharikoriko, tiako ny lalao ary miaina miaraka amin'ny lag mitohy aho, ary namana miaraka amin'ny Galaxy S3, ambany noho ny lafiny rehetra eo akaikin'ny toeram-pitrandrahana, tsy misy tara izy ireo, miresaka lalao iray ihany ... Ho an'ny zavatra bebe kokoa napetrany, Sinoa dia Sinoa ... Tsy mandany vola 1 euro akory aza aho amin'ny finday sinoa
Valiny tamin'i Merchy
JW dia hoy izy:
Nanandrana izany aho tamin'ny androny, ary ny marina dia ny vidiny dia toa tsy dia hitako loatra. Hividy G2 aho alohan'ity P8 lite ity indrindra satria mahatsiravina ny sosona Huawei ary somary eny na eny, ratsy kokoa noho ny an'ny Samsung izany.
Valiny amin'i JW
uptheirons dia hoy izy:
Eny, manana finday Ascend P7 mitovy aho ary tsy misy tara, tsy fantatro izay lalao lalaovinao, fa miaraka amin'ny RF2012 ohatra tsy misy olana, io ihany koa dia zavatra fandefasana, tsy ampiasaiko ilay tonga ho emui mahazatra, fa Smart Launcher, minimalist kokoa ary mandany loharanom-pahalalana kely kokoa, ary lazaiko aminao, aotra lag, ary tena faly amin'izany mandritra ny herintaona.
Izay lazainao momba ny fakantsary Alfonso, tena marina, ny an'ny P7 dia basy koa.
Valio ny uptheirons
Mieritreritra aho fa misy lesoka satria ny KITKAT P8 LITE dia tsy miaraka amin'i Android 5.0
Valiny amin'i ALBERTO
ny P8 Lite dia efa navaozina ho Android 5.0.
Miala tsiny Alfonzo. Mipetraka any Venezoelà aho, tonga amin'ny alàlan'ny ota ny fanavaozana na misy fomba hanatanterahana izany amin'ny tanana
Tsy misy olana Alberto 😉
Raha ny aminao dia matahotra aho fa ny hany safidy mety hanananao dia ny famongorana ny telefaona, dia efa afaka nametraka ROM miaraka amin'ny Android 5.0 ianao, saingy manoro hevitra anao aho hiandry ny famoahana ny vaovao farany.
Miguel Angel Gamero mpiambina dia hoy izy:
Mampiasa an'ity kofehy ity aho amin'ny tsy fanokafana vaovao amin'ny lohahevitra mitovy amin'ireo mpandahateny ...
Ity no hita ao amin'ny tranokala Huawei:
Ny herin'ny feo
Ireo mpandahateny audio an'ny Huawei P8 lite dia hihoatra ny antenainao noho ny rafitra fanamafisam-peo marani-tsaina (Smart Power Amplifier) ​​izay manakana ny fanapahana feo rehefa ampiasaina ny fitaovana hampihenana mozika ary, ankoatr'izay, ny tsindry, ny hafanana ary ny amplitude amin'ny manome feo avo lenta.
Ankoatr'izay, ny fisarahana ireo mpandahateny hi-fi dia manakana ny fahaverezan'ny feo ambany ambany. Ny feo rehetra dia mazava kokoa, maranitra ary amin'ny antsipiriany kokoa.
Nomariko ny ampahany miresaka momba ny mpandahateny, amin'ny plural.
Mety hadisoana io fa milaza maro. Raha ny amiko dia iray ihany no henoko.
Valio ireo mpiambina an'i Miguel Angel Gamero
Fanontaniana roa ... henoko / novakiako fa ny iray amin'ireo mpandahateny ihany no miasa, mikasika ny famongorana telefaona ary hametraka rom hafa, heveriko fa sarotra be ilay olana, tsy mbola misy romana ho an'ity telefaona ity izay mahalala momba izany, ary mijery ny HTCMania saika isan'andro aho, satria ny zavatra voalohany tiako hatao raha mividy azy aho dia ny manaisotra ny ROM izay entiny fenoina sy miaraka amin'ireo fako misy ilay faritra manokana, toy ireo orinasa rehetra alehantsika fa hey, amin'izao fotoana izao, tsy azonao atao izany .. ary matahotra mafy aho fa ny maha-processeur anao manokana, dia ho zavatra sarotra be hita ...
eny, azafady ... mihoatra ny fanontaniana roa, nuansa roa izy ireo ... saingy noho ny tsy fahalalako azy dia tsy misy afa-tsy amin'ny mpampanonta no anomezako hevitra raha toa ka afaka manome fampahalalana bebe kokoa momba izany ianao ... Misaotra indrindra salam ...
Mikasika ny olan'ny ROMS, marina ny anao, notadiaviko ary toa sarotra hodiovina ny P8 Lite, ka mila miandry isika. Mikasika ireo mpandahateny kosa, rehefa mahita faritra roa misy lavaka ianao dia mety hieritreritra fa misy mpandahateny roa, fa ny iray amin'ireo "mpandahateny" roa dia ny mikrô. Na izany na tsy izany, efa nolazaiko taminao fa manana HTC One aho, noho izany ny olana dia nanjary variana be aho, ary ny zavatra niainana niaraka tamin'ny P8 Lite tamin'io lafiny io dia tena tsara.
Misaotra betsaka Alfonso tamin'ny fanazavana momba ny mpandahateny sy ny feo. Ny marina dia tiako ity finday ity dia tena feno, ary raha milaza koa ianao fa tsara izany dia heveriko fa manana ny zava-drehetra izy io mba hahafahako manolo ny S3 misy ahy nefa tsy mandany vola be dia mbola mila mamaha ny olan'ny Roms aho izaho, zavatra tena ilaina, ka hanohy hanaraka azy akaiky aho ary raha vao hitako fa mandray Roms izy ireo dia handeha ho azy aho ... arahaba
John gutierrez dia hoy izy:
Salama Alfonso, andro tsara, manana lite p8 aho ary tato ho ato. Tsy avelany hiditra hilalao ady maoderina 5 aho, miditra ary zara raha. Hanomboka ny lalao aho, ary ny iray hafa tiako ho fantatra ny fomba hongotako ny p8 lite, manoratra avy any Kolombia aho, antenaiko fa afaka manampy ahy ianao
Valiny tamin'i John Gutiérrez
Niaraka 1 volana aho ary isan'andro dia faly kokoa amin'ny fividianako, avy amin'ny iPhone aho, teo aloha dia nanana telefaona varavarankely ary manana finday Android koa ny zanako, ka manana modely azo ampitahaina aho ary telefaona mahafinaritra izany ry namana miaraka amin'ny maodely izay avo lenta toa ny galaxy s4 na note 2 ry zareo, rehefa avy nanandrana izany ary nahita fa mobiendo miaraka amin'ny orinasany mba hahazoana azy ireo
Salama, miarahaba anao aho, tiako hojerena izay smartphone Huawei manoro ahy ahy hampiasa azy io raha toa ka tsara kokoa noho ny mivoaka eny an-tsena ...
avy amin'ny zavatra niainako dia nariako ny P8 Lite na ny P8 raha mila terminal lehibe kokoa ianao.
Ahoana no ahafahako manao pikantsary amin'ny p8 lite-ko
tsindrio ny bokotra volume ary hidina miaraka amin'ny bokotra herinaratra miaraka amin'ny pikantsary.
Andriamatoa Alfonso de Fruits .. Manantena aho fa hamaly ahy fanontaniana iray azafady. Ny p8 lite dia misy mpandahateny roa, hoy izy ireo fa iray ihany no miasa. Marina izany. Maniry ny valinteninao aho, misaotra.
Gonza dia hoy izy:
Salama Ramón, tsy izaho no tonian-dahatsoratra, fa ny famakiana ny fanehoan-kevitra dia efa nahavaha izany fanontaniana izany.
Raha ny fisaorana an'i Alfonso tamin'ny famakafakana dia nitady fampahalalana momba ity finday ity aho ary rehefa avy namaky azy dia hividy azy aho. Mirary ny soa indrindra
Valio i Gonza
Ny fanontaniako dia ny momba ny fandrakofana an-tariby sy an-tserasera an'ny P8 lite, satria somary very aho tamin'ity hdspa sns ity. Ny olana dia ny fampitahana azy amin'ny Ace 2 tsotra, ity farany dia manana protokolan'ny fifandraisana bebe kokoa. ?
Misaotra anao. fiarahabana
Te hahafantatra aho raha afaka manova ny mpampiasa amin'ity findainao ity ianao, ity fanontaniana ity ve dia voadona ahy satria tsy misy tranonkala mamaly azy.
Efa ela aho no nanandrana nanao pikantsary ary nahafinaritra ny tantaran'ny forum hatramin'ny nahitako ny fomba hanaovana azy.
Fanontaniana. Nametraka fahatsiarovana fanampiny aho tamin'ny telefaona fa rehefa manandrana misintona rindrambaiko aho dia milaza amiko fa tsy ampy ny habaka.Fomba ahoana no ilazako azy hametrahana azy amin'ny fahatsiarovana Sd?
Paoooo dia hoy izy:
fangatahana andro vitsivitsy lasa izay dia nividy huawei p8 lite aho, mandeha tsara izany, tsy misy afa-tsy olana amin'ny whatsapp, tsy afaka mizara ny sariko nalaina tamin'ilay fakantsary telefaona iray ihany aho, nahazo lesoka aho ... tsy fantatro raha afaka manampy ahy azafady
Valiny amin'i Paoooo
Ary ny kalitaon'ny fandraketana horonantsary izay ao amin'ny Huawei P8 Lite ary manana NFC na tsia ..
Oscar Diaz Marquez dia hoy izy:
raha manana nfc ianao
Valiny tamin'i Oscar Diaz Marquez
salama: zavatra mitovy amiko no mitranga rehefa te-haka sary aho amin'ny whatsapp fa tsy azoko… Tsy raisiko mivantana !!!!!!
Lesly dia hoy izy:
Salama, nanana lite Huawei P8 aho, ary afaka miteny aho fa finday tena tsara sy mifaninana izany raha oharina amin'ny hafa avy amin'ny marika fanta-daza, nampiasako izany tamin'ny alàlan'ny mailaka fampiharana, lalao sasany toy ny vatomamy, editorin'ny sary, tambajotra sosialy, sns., indrindra ireo.
Ny fatiantoka nahazo ahy momba ny telefaona finday dia ny hoe na dia nanao ny fanahafana mba hahazoana fampandrenesana ho azy aza aho, noho ny fisian'ny fampiharana ahy rehetra, ny fampandrenesana azoko avy amin'ny mailaka, facebook ary app fotsiny no azoko. ohatra); na izany aza ny rindranasa toa ny mailako yahoo, na lalao toy ny vatomamy, tsy nahazo fampandrenesana ary tsy maintsy nanokatra ny rindranasa ary vao nohavaozina ary niditra ny fampandrenesana.
Te hahafantatra aho raha nisy olon-kafa nandalo an'io, raha mahazatra ny lozisialy misy azy ireo na izay mety hitranga.
Valiny tamin'i Lesly
Tsy tonga any amiko ny fampandrenesana WhatsApp
jaxllax dia hoy izy:
Salama namana, miaraka amin'ny sosona huawei, mamonjy fandaharana fanadiovana marobe farafaharatsiny aho, azonao atao ny mametraka ilay rohy mankany amin'ilay mpiaro ny efijery malemy fanahy, amin'ireo sary toa heveriko fa misy azy io, toa tery tokoa ireo sary ary nividy iray aho fa tsy dia ara-drariny toa an'ity ity, mijanona lavitra be amin'ny sisiny izy, toy ny roa milimetatra mihoatra ny manodidina ny kontour ary mitaraina momba izany ny rehetra ao amin'ny fanehoan-kevitra momba ny fividianana.
Mamaly an'i jaxllax
Rehefa avy namaky ny hevitrao momba ity terminal ity aho dia nanapa-kevitra ny hividy azy miaraka amin'ny karatra SD 32G. Na dia napetrako ho toy ny default ao anaty fitehirizana aza ity karatra ity dia alaina ao anaty fahatsiarovana anatiny ny rindranasa rehetra ary tsy mamela ahy hamindra izany ho an'ny D. Ka ny fahatsiarovana ny telefaona dia mihena amin'ny dingana hafainganam-pandeha raha ny SD kosa foana tanteraka. Misy hevitrao momba izay mety hitranga. Misaotra betsaka
Salama tsara. Nanana Huawei nandritra ny 3 andro aho ary tiako izany, saingy te hanontany anao fanontaniana vitsivitsy aho. Ny tena lehibe dia ny tsy fantatro ny fomba fanilihana ilay klavier maminavina mialoha. Fantatro fa mety ahazoana aina kokoa bla bla, fa tena fiadanan-tsaina ny fahalalana fa afaka manala azy aho. Nanova ny Swipe ho an'ny Google aho saingy mahazo ny fiantsoana ary tsy dia tiako izany. Nofidiko ny Huawei iray tamin'ny famonoana ny safidy rehetra amin'ny «Fanitsiana mandeha ho azy», «Faminaniana ny teny manaraka» ... Ka tsy haiko raha manana lesoka ny finday.
Zavatra iray hafa dia ny fahitako fa navadika ho azy ny bluetooth, tsy dia mampatahotra ahy intsony izany satria tsy nahy no nanomezako azy, na dia tsy hitako aza. Saingy efa novakiako hevitra be dia be fa misy lesoka ny olona rehefa mampifandray azy amin'ilay mpandahateny fiara, tsy haiko.
Ary farany, resaka tsy fahombiazan'ny "tsindry indroa" no resahan'izy ireo. Tsy fantatro raha toa ka manondro ny safidy hamaha izy ireo (izay toa azo atao toa izao, mbola tsy nanandrana aho) na koa amin'ny fotoana anoratana. ny fitendry, mahazo litera 2 misesy ianao nefa tsy tianao. Izany no nanjo ahy, fa amin'izao aloha dia apetrako amin'ny mbola hahazoako azy io.
Ilaina ny fanampiana Cq, miala tsiny amin'ilay bileta 😉
Pedro Fernandez sary placeholder dia hoy izy:
Salama Miryam: Hadisoana fotsiny fa nandefa hevitra tamina olon-kafa aho. Manana ny olana Bluetooth ao anaty fiara aho. Doka ho ahy ity miaraka amina hafatra eo amin'ny fakan-tsarin'ny fiara toy ny LOW SIGNAL. Raha nomena vahaolana na hevitra ianao dia zarao amiko. Izaho koa dia manana Moto G ary ao anaty fiara dia miasa tsara izy io nefa tsy mifandray. Amin'ny tranga P8 dia matetika izy io. Misaotra mialoha.
Valiny tamin'i Pedro Fernandez
Jhon Jairo Morillo dia hoy izy:
Salama, manana olana aho ao amin'ny huite p8 lite-ko dia rehefa mijery horonantsary amin'ny facebook aho dia maty ny efijery dia tsy fantatro izay anton'io olana io. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Jhon Jairo Morillo
Italo Garcia dia hoy izy:
Salama, manana olana aho, tsy mandeha amin'ny serivisy ny huawuey p8 lite
Valiny tamin'i Italo Garcia
Fa maninona no tapaka ny radio ary manakana azy io hatrany?
Vao nahazo Huawei P8 Lite aho ary manana olana: Rehefa manandrana mampifandray wi-fi aho dia mahazo efijery kely miaraka amin'ireo fampianarana mba hahafahako miditra ny tenimiafin'ny router fa tsy mivoaka ny keyboard. Efa nanandrana fomba an'arivony aho fa tsy misy fomba hiseho eo amin'ny efijery ny fitendry keyboard. Ary satria mila mifandray amin'ny Internet aho na inona na inona, manana telefaona tsy misy ilana azy tanteraka aho satria tsy misy klavier hita na aiza na aiza. Andao hojerena raha azonao lazaina amiko raha nisy zavatra tsy nety nataoko sa inona. Misaotra betsaka.
Johan Leal dia hoy izy:
salama atoandro namana ... manana Huawei P8 Lite aho .. ahoana ny fomba fampidinana video, amin'izao fotoana izao raha mamela ahy hahita azy ireo aho, saingy tsy avelako hitahiry izany amin'ny fahatsiarovana an-telefaona sy / na amin'ny karatra SD tsy ananako tsy mahita ny safidy momba an'io, misy olona afaka manampy ..
Valiny tamin'i Johan Leal
Salama daholo, avy amin'ny iPhone 4 aho ary ny tena marina dia gaga tamin'ny fomba itovizany haha ​​aho, mahafinaritra ahy ny afaka mampakatra mozika indray ao anaty lahatahiry raha tsy misy iTunes maharikoriko.
Ny olana hitako dia ny volume, ambany be raha oharina amin'ny iphone misy headphone. Mandany fotoana be amin'ny fitateram-bahoaka aho ka toa zava-dehibe amiko ...
Salama, nividy P8 Lite fotsiny aho ary mbola mahita ny tombony azo avy aminy, saingy mahita ny tenako amin'ilay olana fa tsy mihaino ny mozikan'ny sela aho amin'ny alàlan'ny Bluetooth an'ny fiara; Izy io dia efa mifamatotra ary afaka manao antso an-tariby aho, na dia mitady mafy an'izany aza aho, tsy hitako ny fomba fihainoana ny mozikako ao anaty fiara; misy mahay manao azy?
Manana ny p8 lite aho ary eo afovoany tena tsara izany, fa raha tsy maintsy mividy ianao dia safidio ny g2.
Sayo dia hoy izy:
Manana huite p8 lite aho, eo ambanin'ny rindrambaiko hanakanana ny rindranasa, toa ny AppLock sy ny hafa izay mitovy ny asany amin'ny fanakanana sy fanomezana tsiambaratelo ny watsapp anao sy ny hafa ary tsy manakana, misy lesoka ao aminy, tsy misy mandeha, rehefa manokatra aho ny efijery ny blocker Tsy miasa intsony izy, efa nanandrana maromaro aho ary mitovy ny zava-mitranga ,,,,,,, fantatrao ve fa misy miasa amin'ity sela ity?
Mamaly an'i Sayo
L dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha tsara ny mametraka takelaka fitaratra miaro
Valiny amin'i L
Carmenb dia hoy izy:
Nanana HUAWEI 630 aho ary nanomboka omaly dia manana ny lite P8 aho ary satria tena vaovao momba ireo zavatra ireo aho, misy afaka miteny amiko ve hoe aiza no misy ny lakilen'ny MENU? Malahelo aho fa tsy mahita azy amin'ny lafiny rehetra
Valiny tamin'i Carmenb
Hadinoko ny milaza fa tsy mahita torolàlana na torolàlana amin'ny serivisy rehetra aho na amin'ny fomba fametrahana na fanesorana zavatra ao amin'ny P8 lite, toy ny fametrahana feo ho an'ny vondrona WHATSAPP ary iray hafa ho an'ireo namako manokana. Ny mpitari-dalana dia mety hahasoa ahy.
Misaotra betsaka nanatrika ahy.
ilia dia hoy izy:
Salama daholo. Holazaiko kely aminao ny zavatra niainako tamin'ity finday ity.
1-Andao hiresaka ny hafainganana - Telefaona mahery vaika amin'ny vidiny, finday iray izay mihoatra ahy Moto G3 satria efa samy manana aho ary ny marina dia tsy naka finday toy izao efa ela.
2- Mpikabary - Araka ny asehon'ny lahatsoratra dia misafotofoto amin'ny feo ihany koa ny zaza, izaho koa dia gaga ahy satria efa mpankafy an'i Huawei foana aho ary nandiso fanantenana ahy tamim-peo foana izy ireo, fa ny tena marina dia nihoatra ny be loatra .
3-Design - finday tena tsara sy tsara tarehy, miaraka amin'ny fiolahana tonga lafatra. Finday tsara tarehy amin'ny lafiny rehetra.
4-Fakan-tsary - Amin'izao fotoana izao dia misy zavatra iray izay mahadiso fanantenana ahy. Satria tsy manana fakantsary mitovy amin'ny P8 Grande izy io, zavatra iray izay hahatonga ny faritra Huawei manontolo ho manokana, fa ny kalitaony dia tonga lafatra 100% tsy misy isalasalana. Indray andro nalaiko ny NIKON SY NY HUAWEI nataoko io sary io ihany ary ny fahamarinana dia azo ampitahaina amin'ny fakantsary sy ny zava-drehetra.
Raha tsy misy holazaina bebe kokoa, ny fividianana ity finday lehibe ity dia tsara amin'ny vidiny.
Mamaly an'i Ilia
jiavi dia hoy izy:
Manana olana amin'ny P8 Lite aho. Nahazo fanavaozana aho, ny B170, nametraka azy aho ary nanomboka teo dia tsy mandeha amiko ny internet, mail, na whatsapp… raha mifandray amin'ny wifi aho. Misy mahay manamboatra azy ve?
Mamaly an'i jiavi
Amy dia hoy izy:
Salama, manana lite Huawei P8 aho ary ny hany olana nahazo ahy dia ny feo ... Fa tsy miaraka amin'ny naoty ambony, fa amin'ny ambany, satria ohatra rehefa manoratra feo am-peo amin'ny WhatsApp sy mihaino azy amin'ny ambany bontolo dia ratsy ny feony, tsy mazava ny feo na kely aza.
Raha sendra olona iray iny zavatra iny na nanolo-tena ahy hanao zavatra ianao dia misaotra anao aho.
Valiny tamin'i Amy
Jose Arturo Perez N dia hoy izy:
Salama, iza no manampy ahy, tsy mahomby ny Radio P8 Lite ahy, efa naverin'izy ireo izany ary tsy misy, misaotra ireo fanampiana rehetra azonao omena ahy
Valiny tamin'i Jose Arturo Perez N
Salama manana olana amin'ny huite p8 lite-ko aho, nividy aho 5 andro lasa izay ary te-haka sary panoramic tamin'ny andro nividianako azy fa ny fiandohan'ny sary ihany no azoko, tsy mivoaka avy amin'ny ambiny izy io, inona no azoko atao?
Manana ny telefaona aho tamin'ny roa andro lasa izay ary ny ratsy indrindra manerantany ..
Tsy afaka manoratra haingana ianao dia miverina ny litera .. averiko indroa isan'andro ny bateria… mahatsiravina… € 199 ny vidiko ..
Valiny tamin'i Jonathan Inkwell
Salama Jonathan sy foreros,
Misafidiana sary manaingo avy amin'ny menio. Misy boaty kely hiseho eo ankavia ary zana-tsipìka eo afovoany (entina ilazana fa tsy maintsy ahetsika / ahodinkodina ny fakan-tsary ankavanana haka sary mifandimby) Avy eo tsindrio ny hidy ary alao ny sary voalohany; avy eo ahodinanao miadana ny fakantsary mandra-pahatonganao amin'ny fihodinana kely ao anatin'ny teboka fotsy izay miseho eo amin'ny efijery; amin'izao fotoana izao dia mivadika maitso ny teboka fotsy ary maka sary hafa; ary sns izay heverinao fa mety; Farany, tsindrioo indray ny vavam-baravarankely ary alain'ny fakan-tsary ny sary nalaina rehetra ary ahodina ho lasa panorama tokana izy ireo. Manantena aho fa mety aminao izany.
Andrea Ochoa dia hoy izy:
Salama, ny olako dia ireo loko asehony eo amin'ny efijery ary mijanona ny sary, tsy loko mahazatra izy ireo, ohatra ny mena, toa volomparasy ary efa nanandrana nanova ny fametrahana ny mari-pana amin'ny loko aho ary tsy misy manatsara. Misy afaka manampy ahy ?. Misaotra betsaka
Valiny tamin'i Andrea Ochoa
Mauricio Becerra Castro dia hoy izy:
Fanontaniana iray, efa namaha ny olanao ve ianao, satria izaho manana an'io koa, raha voavahao dia mba omeo ahy ny valiny.
Valiny tamin'i Mauricio Becerra Castro
Sonia Esteban dia hoy izy:
Tsy misy mamaly ny fanontaniana rehetra etsy ambony !!! ??
Manana olana roa aho, ny iray tsy fantatro ny fomba hampihenana ny habetsaky ny fampandrenesana WhatsApp, ny iray hafa dia ny fomba namakiako ny hevitro teo aloha, rehefa manoratra aho dia miverina ireo litera ..
Koa satria misy ity forum ity dia miangavy anao aho mba hamaly.
Valiny tamin'i Sonia Esteban
Tao anatin'ny telo andro nampiasana dia lasa ny rafitra fandidiana, raiso!
Satria tsy misy fampiharana fiarovana dia manana lite P8 aho ary io no tsara indrindra, ny hany zavatra tsy haiko dia hoe maninona no manana an'io olana manokana io, azonao valiana ve ny fanontaniako?
Mampisalasala ny Huawei Huawei P8lite.
16 gigs io, eo amin'ny efijery dia milaza amiko fa manana gig 10 aho ary manana 1.7g maimaim-poana.
Ka kely fahatsiarovana ve no anananao?
Inona no ataoko raha izany ...
Alfonso de Frutos, te hanontany anao aho hoe ahoana no hataoko mba hamerana ny angon-drakitra, saingy navakavahan'ny fampiharana. Izany hoe, hitako io safidy io ao amin'ny Data Traffic Management-> Network Applications, fa izy io dia natao ho an'ny rindranasa rehetra miaraka ary tiako ho afaka hanao izany ho an'ny eny fa tsy misy hafa, ohatra: ny hahafahana miala amin'ny WhatsApp mavitrika ary mametra ny Facebook. Io dia mety ho? Tiako ny fiaraha-miasa amin'ity. fiarahabana
Cristina4 dia hoy izy:
Salama, azafady, Cristina no anarako ary manana Huawei p8 lite aho, ny finday teo aloha dia Huawei ihany koa fa ny lesoka hitako dia ny fahatsapana ny efijery satria rehefa manoratra dia manelingelina be .. Mee rwwithe the keys a betsaka ary manahirana amin'ny ora anoratanay, tsy hitako izay hatao fa nisintona klavier an'arivony aho fa tsy afaka manamboatra na inona na inona, sendra olon-kafa izany? Misy vahaolana ve? Nentiko tany amin'ny magazay izy ireo ary noteren'izy ireo hijerena ny efijery aho satria nilaza izy ireo fa nisy rano raraka fa tsy hoe nividy voaisy tombo-kase aho ary raha vao nosokafako dia toy izao .. Azafady ampio fa mahasosotra be ..
Valiny amin'i Cristina4
sonixpanoramix dia hoy izy:
Eto amin'ity chat ity dia tsy misy mamaly .. Tahaka ny Cristina anao aho manana azy mandritra ny iray volana latsaka ary manomboka amin'ny andro voalohany dia avo roa heny ny litera ...
Mamaly an'i sonixpanoramix
Nanoratra etsy ambony aho milaza zavatra mitovy izay averina ireo litera. Novidina tamin'ny mediamarkt izy io. Amin'ny farany dia hay nivarotra ahy tamiko izy ireo taloha. Naveriko io
Mpampiasa Huawei dia hoy izy:
Salama, manana huite p8 lite aho, ahoana no hanesoranao ny feo vokariny rehefa ampodinao?
Mamaly amin'ny mpampiasa Huawei
Mandany vola i Naiara dia hoy izy:
Salama e! Eny, tsy haiko raha ho jinx irery aho fa ity telefaona ity dia manome olana be dia be amiko ... tamin'ny 1er aorian'ny 2 volana dia "maty" tampoka izy ary ankehitriny dia tsy mampifandray ahy amin'ny Wi -Fi any an-trano, ity olana amin'ny tamba-jotra ity ihany no tsy ... Tsy mahazo aina aho amin'ny alàlan'ity finday ity. Raha misy manome ahy vahaolana dia tiako izany
Mamaly ny vidin'ny Naiara
Salama fanontaniana iray. Te hahafantatra aho raha azo alamina ilay huite p8 lite ka ny bokotra hiverina dia eo amin'ny ilany ankavanana fa tsy amin'ny ilany havia. Misaotra anao
agustin fernandez isla dia hoy izy:
Te hanana olona hanome orientation ahy aho hoe maninona no mihidy ny huawei p8 lite finday ary tsy mihaino ny fifandraisana izay iantsoako, vonoiko izy io ary averiko, apetrako ny pi ary miasa indray izy io, mety ho , Mila fanazavana kely aho
Mamaly an'i agustin fernandez isla
hugo gonzalez dia hoy izy:
Salama, manana ny lite p8 aho, misy mpandahateny roa, ny 2 tsy maintsy henoina sa firavaka iray ny iray amin'izy ireo? Ankasitrahako raha mamaly ianao, misaotra
Mamaly an'i hugo gonzalez
Kathy dia hoy izy:
Manana iray aho, mahafinaritra be izany, saingy manana olana amin'ny fametrahana ny lalao tiako indrindra aho, milaza amiko ny vatomamy vatomamy fa tsy mifanaraka amin'ny kinovan'ny fitaovana ataoko hametrahana azy.
Mamaly an'i kathy
gmestres dia hoy izy:
Tsy azoko hoe misy olona maneho hevitra momba ny kalitaon'ny feo an-telefaona amin'ny finday amin'ny famerenana, somary kivy aho amin'izany. Mety misy olona manome soso-kevitra amin'ny finday antonony manana kalitao tsara amin'ny sofina? Tsy misy dikany amiko ny mpandahateny. Manao ahoana ny P8 Lite amin'io lafiny io? MISAOTRA
Valio i gmestres
Tyrone dia hoy izy:
Salama tsara! Manana ny P8lite aho fa mpandahateny iray ihany no miasa ho ahy rehefa mihaino mozika aho, raha sendra mahazo ny olon-drehetra izany?
Ary koa rehefa mandefa hafatra WhatsApp dia tsy maneno izany
Valiny tamin'i Tyrone
Manana ny P8lite aho fa mpandahateny havia ihany no miasa ho ahy, toy izany koa no nahazoako azy, vaovao io
Tsy tiako izany amin'ny toe-jiro manjelanjelatra tsy ahitanao ny efijery ary koa ny iray amin'ireo slot chip dia tsy mandeha foana.
Fa maninona no tsy hitako ny isan'ny fampandrenesana whatsapp, misy olona afaka manampy ahy?
rusel dia hoy izy:
misy mahalala ny fomba ataoko amin'ny radio an'ny huawei p8 dia tsy mihetsika ary ny wi-fi
Mamaly an'i rusel
Salama Rusel. Tsy nanana olana tamin'ny radio aho, niditra an-telefaona aho, nanokatra ny radio sy ny tanjona. Mety io.
Raha tsy mandeha izy dia manoro hevitra anao aho hanova ny earphone satria miasa toy ny antena izy ary raha ratsy dia hanome anao olana izany.
Manana P8 Lite aho.
Tsara amin'ny ankapobeny
Nahita fihemorana aho. Rehefa nampifandraisiko tamin'ny fiara ilay bluetooth dia manome ahy tampoka ilay hafatra hoe LOW BT SIGNAL.
Avy eo, rehefa afaka kelikely dia sitrana izy ary mifandray indray.
Izaho koa dia manana Moto G, izay mbola tsy nahita an'io olana io.
Raha misy mahay mamaha azy dia tiako ny fifandraisana.
giron mena dia hoy izy:
Salama namana iray fanontaniana rehetra mampifandray ny headphones amin'ny finday p8 lite dia tsy mandeha amin'ny headset satria efa voasedra ireo fitaovana fihainoana amin'ny finday hafa izay raha mandeha io, fa amin'ny p8 lite dia tsy mandeha izy ary misy headphone marobe notsapaina ary mitovy ihany
Mamaly an'i giron rojas
Luis de la Torre dia hoy izy:
Manana ny huaweyp8 aho-ary ny mpandahateny kosa maheno ny lafiny ankavia fotsiny. Mahery fa ilay eo amin'ny ilany ankavanana dia normal na misy lesoka
Valiny tamin'i Luis de la Torre
Salama, raha ny amin'izay henonao ihany ny mpandahateny iray dia satria iray ihany ny azy, ny iray hafa dia ilay mikrô izay toa mpandaha-teny faharoa. Manana fanontaniana aho: na iza na iza nanandrana fitadidiana micro sd lehibe kokoa noho ny 32 Gb? Ary raha manohana ny SDXC? Sa Type SDHC fotsiny ??
Juliana dia hoy izy:
Salama, iray volana lasa izay no nividianako ny P8 lite, ary manana olana lehibe aho rehefa mampiasa ny safidy hizarana angona avy amin'ny findaiko izay mifandray amin'ny Wi-Fi, miaraka amin'ny PC desktop-ko, maharitra minitra vitsy ary dsps ny maty ny finday tsy misy mihoatra ny. Ary tena mamoy fo tokoa izany satria tsy manana safidy wifi ny pc, fa miahiahy ihany koa aho fa ho simba ny sela amin'ny famonoana azy amin'ny fomba tsy maharitra, misy mahalala ny antony, azafady, ny rahavaviko manana kisoa finday nokia ary eny afaka mizara angona tsy misy olana amin'ny findainy izy.
Valiny tamin'i Juliana
Fredis quintana dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahalalanao raha manana fanontaniana mitovy amin'izany ny iray aminareo? Efa nanandrana nifandray tamin'ny fahatsiarovana USB ianao? Tsy mahafantatra ahy izy io, ny tiako holazaina dia hoe kilemaina aty aoriana izy io ary tsy mamela ahy hampihetsika azy
Valiny tamin'i Fredis Quintana
Salama, ny finday dia tokony hanana ram 2gb fa 1gb no ampiasain'ny rafitra ary amiko io ihany no mitranga sa mitovy amin'ny hafa ??? Xfa misy olona manampy ahy amin'izany
Misy manazava amiko ny antony tsy ahafahako mamindra ny fisoratana anarana amin'ny micro sd-ko? Napetrako ny iray amin'ireo 8 tsy misy zavatra hafa nefa mbola tsy afaka manavao na misintona zavatra hafa aho satria tsy tadidy intsony ny telefaona
Namboarin'izy ireo ny findaiko ary rehefa napetrako ny sd dia tsy nisy na inona na inona nivoaka, tsy haiko ny mamerina ny vaovao ao anaty karatra, misaotra.
Luis Fernando Gonzalez Drada sary placeholder dia hoy izy:
Nahazo ny P8 Lite Ale 23 Double Sim Card aho mandritra ny iray volana, afaka mampiasa simcards roa ve aho ary miaraka amin'izay dia mampiasa carte microSD, na raha mampiasa simcard aho dia tsy afaka mampiasa MicroSD ary ny mifamadika amin'izany? Misaotra ny valinteninao, famihinana avy any Bogotá Colombia.
Valiny tamin'i Luis Fernando Gonzalez Drada
Gabriela Buele Abad dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha ny output output dia amin'ny habaka roa amin'ny faritra ambany?!
Valiny tamin'i Gabriela Buele Abad
Salama, mpandahateny ny ankavia ary mikraonina ny havanana
Mark Lucero dia hoy izy:
Te hividy p8 Lite ve ianao? Tsara aloha ny gogleen: p8 olana Lite WiFi (olona maro no manana olana mitovy). Tsy naharitra iray volana ny vadiko ary nanomboka tsy nahomby izy, tsy mifandray amin'ny WiFi intsony, andramo Hard reset, avereno ROM izay notadiaviko fanazavana na aiza na aiza ary tsy misy. Ny fahamarinana izay mamela be faniriana.
Valiny tamin'i Marcos Lucero
Arbey solis dia hoy izy:
Salama folak'andro !! Inona no mitranga dia te-hampifanaraka ny seranana microSD amin'ny NanoSim aho nefa tsy mamela ahy .. tsy mamela ahy .. inona no azoko atao amin'izany? Azafady mba ampio aho !! MISAOTRA
Mamaly an'i Arbey solis
Héctor Hernández R. dia hoy izy:
Ny rindranasa Google Earth dia nianjera tao anatin'ny segondra vitsy taorian'ny nidirany. Nametraka azy io indray aho ary tsy voavaha ny olana.
Valiny tamin'i Héctor Hernández R.
fabio narvaez dia hoy izy:
Salama, iray volana lasa izay dia nomen-dry zareo pite l8 aho ary niasa tsara nandritra ny 20 andro, ankehitriny tsy mandeha ny wifi, efa namaky fanehoan-kevitra maro momba io olana io ihany aho, mahamenatra satria manana endrika tsara izy io, saingy tsy afaka atoro anao.
Mamaly an'i Fabio Narvaez
Salama, ny zava-nitranga tato ho ato, nividy ilay huite p8 lite aho avy eo. Te hahafantatra momba ny bateria aho satria maharitra 6 na 8 ora ihany io.
Salama, manana p8 Lite aho ary niondrika ny findaiko, nisy olona sendra anao ve?
Agnes dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra ny fomba hamoha ny telefaona mandrakizay aho satria tsy hitako ilay safidy. MISAOTRA
Valiny tamin'i Agnes
Niondrika aho ary tsy mandeha izany. Lazain'izy ireo amiko ny serivisy ara-teknika fa tsy manarona azy ny fiantohana ... 1 taona monja ny telefaona ...
Mamaly an'i esther
Avy amin'ny p8 Lite no tiako holazaina
M. Eugenia dia hoy izy:
Salama e! Manana Huawei p8 lite vaovao aho. Ary mandany bateria be ny fitaovana novonoina. Misy zavatra iray milaza fa navitrika ny radio ary tsy nampihetsika azy aho .. Mety misy olona afaka manampy ahy ve?
Valiny tamin'i M. Eugenia
Eugenia dia hoy izy:
Salama manana Huawei p8 lite aho ary misy singa ao amin'ny antsipirian'ny fanjifana bateria milaza hoe; nihetsika ny radio ary mandany ahy be dia be. Tsy mampiasa radio aho. Misy mahalala hoe inona izany?
Valiny tamin'i Eugenia
Aza dia hoy izy:
Salama, manana huawei p8 lite aho, ary tiako ho fantatra hoe ahoana ny fahitako ireo sms nalefako
juanjg dia hoy izy:
Salama, misy mahalala ny famahana ny olana amin'ny tsindry roa? rehefa manoratra ianao dia efa miseho ny litera roa
Mamaly an'i juanjg
Edgar Mc dia hoy izy:
HELLO Namana, QUERY IANAO HUAWEI P8, NY OLANA AMIN'NY CABLE USB TSY AZoko atao ny mamindra rakitra amin'ny solosaina PC, AZO ATAO fa nisy kilema nataoko, nanomboka ny nahatonga ahy ho ilay fiasa mampihetsi-po fotsiny, misy olona afaka manondro ahy hanao ilay asa. TRAS AVY AMIN'NY FILES, MISAOTRA ANAO
Valiny tamin'i Edgar Mc
Salama alina, tiako ho fantatra ny fomba ahafahako manamboatra ireo sary amin'ny alina, satria nivoaka may sy ratsy tarehy izy ireo. Misaotra anao
Te hahafantatra ny fomba hamahako ireo sary may aho? Misaotra anao
Yessica dia hoy izy:
Salama e! Efa nanana iray volana aho ny Huawei Huawei P8 lite ary ankehitriny dia kely kokoa ny henoko avy amin'ilay mpandahateny noho ny teo aloha. Misaotra mialoha. Mirary ny soa indrindra.
Mamaly an'i Yessica
Salama e! Inona no tsy maintsy ataoko mba hahatonga azy ho toy ny taloha?
Ny fampiharana ofisialin'ny Amazon Cloud Drive dia natomboka tao amin'ny Play Store
Sony dia tsy hivarotra ny fizarana finday avo lenta mihitsy araka ny filazan'ny CEO